Samachar Batika || News from Nepal » काठमाडौंमा केटीहरुले दिउसै खुलेआम गर्दा रहेछन यौ.. धन्दा
यौ’नध’न्दा हुने यी ठाउँमा ‘दलाल’ हरुको बिगबिगी छ । ग्राहक र यौ’नक’र्मी, यी दुई पक्षका बीचमा बसेर नाफा खाइदिनु उनीहरुको दैनिकी बनेको छ । बसपार्क र रत्नपार्कका आसपासमा साँझको समय एकैछिन् उभिए मात्रै पुग्छ, तिनीहरु तपाईँमाझ आफैँ आइपुग्छन् ।
तिनीहरुको प्रश्न हुनेगर्छ, ‘दाई के चाहिएको हो ? केटी चाहिएको भए म मिलाइदिन्छु ? एकदमै च्वाँकच्वाँक ।’ यसो भन्दै उनीहरु तपाईंको सामीप्यतामा आउँछन् । तपाईंले उसँग वार्ता गरिहाल्नुभयो भने उसले आफ्नो कुरा सबै बताएर तपाईंलाई कसरी हुन्छ कन्भिन्स् गर्न तयार हुन्छ ।
यदि तपाईंलाई कन्भिन्स् गर्न सक्यो भने उसलाई बेलुकाका लागि ‘र’क्सीसँग सितन’ जोहो हुन्छ । दिउँसो न उसको कुनै जागिर छ, न अन्य कुनै व्यवसाय । साँझको समयमा २ देखि ३ घण्टा रत्नपार्क र नयाँ बसपार्कको छेउछाउमा बस्यो भने उसको जिन्दगी हासिखुशीले चल्छ ।
प्रहरीका अनुसार फेसबुक, भाइबरजस्ता सञ्जालमा पहुँच भएका ‘दलाल’हरुले अनलाइनबाटै ग्राहक जुटाउँछन् । मोलसमेत उल्लेख भएका फोटोहरू ग्राहकलाई देखाउँछन् । ग्राहकलाई चित्त बुझे भेट्ने स्थान पक्का हुन्छ । स्थान पक्का भएपछि युवती पनि आउँछन् जो आफूलाई मोडल भन्छन् र उनीहरूको लवाइ पत्याउने खालको पनि हुन्छ । त्यसपछि ग्राहकलाई होटलमा लिएर जान्छन् र, शुरु हुन्छ– ग्राहक लु टि ने क्र म ।
शहरमा यौ न ध न्दा घ टेको छैन । प्रहरीले नि’गरानी बढाएको छ । तर बढ्दो बेरोजगारी, काठमाडौंको महँगी मिटर अनि थोरै रकममा जिन्दगी समायोजन, सम्भव नै छैन । मान्छे शुरुमा रमाइलो, त्यसपछि लत अनि बा’ध्यताले दिनदहाडै यौ न ध न्दा मा फ सि रहेको बताउँछ प्रहरी । सामाजिक सञ्जालले यसलाई अरु सजिलो बनाइदिएको छ शहरमा यौ’नसाथी खोज्न ।
प्रकाशित मिति १८ चैत्र २०७७, बुधबार ११:५३